Ụlọ ọrụ igwe aha | Ndị na -emepụta China Label Machine, Suppliers
Igwe akụrụngwa akara karama nwere akụkụ abụọ
UBL-T-102 Semi-akpaka akụkụ igwe nwere akara karama dabara adaba maka otu akụkụ ma ọ bụ akara akụkụ abụọ nke karama square na karama ewepụghị. Dị ka mmanụ mmanye, iko dị ọcha, mmiri ịsa mmiri, ncha ntutu, gel ịsa, mmanụ a ,ụ, reagent kemịkalụ, mmanụ olive, jam, mmiri ịnweta mmiri, wdg.
Nnukwu katọn pụrụ iche
UBL-T-305 Ngwaahịa a kapịrị ọnụ katọn buru ibu ma ọ bụ nrapado kaadiboodu maka mmepe, nwere isi aha abụọ, nwere ike tinye otu aha abụọ ma ọ bụ akara dị iche iche n'ihu na azụ n'otu oge.
Nwere ike mechie isi labeler na -ejighi ma tinye otu akara.
Ngwa katọn obosara dị: 500mm, 800mm, 950mm, 1200mm, Ntọala ala nna ukwu bụ 160mm, 300mm
Onye na -enyocha karama, Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama biya, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama mmanya, Igwe nyocha akara,